Resabe Mikasika Ny Fanomezana Vàhana Ny Zanak’Ilay Shinoa Malaza Mpamokatra Sarimihetsika, Zhang Yimou · Global Voices teny Malagasy
Resabe Mikasika Ny Fanomezana Vàhana Ny Zanak'Ilay Shinoa Malaza Mpamokatra Sarimihetsika, Zhang Yimou
Voadika ny 01 Marsa 2014 3:32 GMT
Peta-drindrina avy amin'ny governemanta Shinoa momba ny politikan'ny zaza tokana nataony. Sary nalain'i @kattebelletje CC: AT-NC
Ilay Shinoa malaza mpamokatra sarimihetsika Zhang Yimou dia naneho fialantsiny tamin'ny fandikàny ny lalàna momba ny tokana, tamin'ny fanekena fa telo ny zanany amin'ilay vadiny ankehitriny.
Ny tatitra mivoaka tety anaty aterineto teo alohaloha teo ny volana Mey 2013 dia milaza fa mety ho niteraka zaza fito izy raha kely indrindra, kanefa noho ny maro amin'ireo zaza ireo zanany tamin'ny vadiny taloha sy fiarahana tamin'ny olona hafa, ary ilay lalàna momba ny zaza tokana dia miainga avy amin'ny fifehezana ny vatan'ny vehivavy, mazàna ny rain-jaza no afa-tsiny manoloana ny lalàna. Satria ny tatitra farany nanambara fa manam-janaka telo i Zhang amin'ilay vadiny amin'izao fotoana, voatery izy noho izany hiaiky ampahibemaso fa nandika ny lalànan'ny fandrindràna fiainam-pianakaviana.
Tao Shina no nanombohan'i Zhang ny asany tamin-kasarotana, nisy tamin'ireo lahatsariny voalohany no voarara tao Shina ny taona 1980 noho ny firesahany loha-hevitra sahisahy, kanefa taorian'izay izy dia nahazo loka maro be ary lasa nifandray akaiky tamin'ireo mpitondra fanjakana. Voafidy hitarika ny fanokafana ny lalao Olympikan'i Beijing izy ny taona 2008.
Tonga tao anatin'ny fotoana anomanan'i Shina hanalefahanka ny politikan'ny zaza tokana ny fialan-tsinin'i Zhang, hahafahan'ny mpivady miteraka fanindroany, raha toa ka zaza tokana ny iray amin'ireo mpivady. Ny lalàna misy amin'izao fotoana izao mantsy raha tsy samy zaza tokana ny mpivady tsy afaka miteraka roa.
Ilay fanovàna nambara ny volana lasa teo no fanalefahana azo tsapain-tànana raha ny fifehezan'ny mpitondra ny vahoakany tato antin'ny efa ho taompolo telo. Kanefa, ny tranga toy ny an'i Zhang sy ireo hafa toa azy dia niteraka fanahiana hoe natao ho an'ny olo-malaza sy ny mpanankarena ihany ilay zo amin'ny fananàna anaka ao Shina satria izy ireo no afaka handoa ny sazy amin'izany. Mahazo ny zo feno atlotry ny lalàna ny zanak'izy ireo, kanefa ny vehivavy izay tsy manana ny ho enti-manana amin'izany dia voatery manala ny zanany. Izany tsy fitovian-jo izany no isan'ny mampiakatra ny hatezeran'ny mponina amin'ny tombotsoan'ny mpanankarena sy ny olona ambony.
Araky ny lalàna, sy maintsy mandoa hetra sosialy fanonerana izany izay kajiana araka ny karama raisiny isan-taona ireo olona manitsakitsaka ny lalànan'ny zaza tokana. Raha kajiana izany ny tokony naloan'i Zhang, araky ny nambaran'ny “People's Daily”, gazety an'ny fanjakana, dia tafakatra hatramin'ny 160 tapitrisa Yuans (eo amin'ny 26 tapitrisa dolara eo), raha hiainga eo amin'ny vola niditra tamin'i Zhang ny taona 2004 araky ny navoakan'ilay filazam-baovao, izay efa ho 80 tapitrisa yuans (12,8 tapitrisa dolara Amerikana).
Mpanoratra fanda-daza Wu Gou, no nanakiana an'i Zhang tao amin'ilay vohikala malaza Sina Weibo tao amin'ilay lahatsoratra nampitondrainy ny lohateny hoe “Mampiseho mibaribary ny fihantsiana ny lalànan'ny fiarahamonina ataon'ireo vato nasondrotry ny tany ao Shina ilay raharaha”:
Fantatr'ireo vato nasondrotry ny tany ireo toy ny olon-tsotra rehetra rahateo fa nanisakisaka ny maha-olombelona sy ny zon'olombelona ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana, kanefa tsy mbola sahy nijoro nanohitra izany sy nanosika ho amin'ny fanovàna ry zareo. Ny nataony aza, manaiky tsy satry ilay fandrindrana ny fiainam-pianakaviana sy misafidy ny hanan-janaka ivelan'ny tokantrano [ tsy miatrika ankarihary akory ilay politika tsy rariny].
Satria niresaka olana sosialy marobe ireo lahatsarin'i Zhang tany aloha, nankamamian'ny mpanao hetsika avy eny ifotony izy. Kanefa, tao anatin'ny taompol roa nisesy izao, dia nikedrena ireo tsena lehibe kokoa ny lahatsariny ary very toerana. Ilay tanora mpisolovava, Young Lewis dia nanoratra tao amin'ny Weibo fa manahirana tsy hay hoe ratsy sa tsara ny toerana misy an'i Zhang amin'izao fotoana izao sady namadika ny vahoaka:
Manohana mafy an'i Zhang ny olona, saingy aleony ny olona ambony. Tamin'ny fotoana nandraràn'ny fanjakana tsy handefasana ireo sarimihetsika novokariny taona maro lasa izay, betsaka ireo olon-tsotra no nanohana azy. Kanefa avy eo navelany teo ny olona tamin'ny nanaovany sarimihetsika malaza sy be mpividy ary lanonam-panokafana ny lalao Olaimpika be korontana.
Wang Xuming, ilay mpitondra tenin'ilay Minisitry ny Fampianarana tao Shina fahiny, dia nanontany tena ny amin'ny fomba nataon'i Zhang nahazoany sata manokana tany amin'ny manampahefana misahana ny fanoratàna ny isan-jaza :
Misy ny filazana hoe i Zhang sy ireo zanany telo amin'ilay vadiny amin'izao fotoana izao dia teraka ivelan'ny mariazy. Manontany ny sasany amin'ireo mpanakiana raha toa tsy mitanila ny manam-pahefana ao an-toerana misahana ny fanoratana ny zaza vao teraka. Nomen'izy ireo sata tsy ho voasazy ve i Zhang ? Te-hanontany moramora an'i Zhang aho ny amin'ny fomba nataony hahazoana famotsorana tamin'ireo manampahefana. Ahoana no nataony hitarihana ho anaty rano maloto ireo manampahefana misahana ny fanoratana ny zaza teraka?
Koa satria zo fototra amin'ny maha olombelona ny fananàna anaka, manana ny mpanohana azy ihany koa i Zhang. Ohatra iray, tao amin'ilay tafatafa niarahana tamin'ilay mpanao gazety avy ao amin'ny ifeng.com ‘ , hoy ilay mpahay toekarena, Hu Shizhi, nanolo-kevitra :
1.Tokony hifaly isika mahita an'i Zhang afaka niala tamin'ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana, satria zo amin'ny maha olona ny fananàna anaka. 2. tsy tokony i Zhang no hiala tsiny, fa ireo tompon'andraikitra amin'ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. 3. Hadisoana azo tsiniana raha toa isika hikiry hitaky ny fitoviana eo anoloan'ny lalàna, lalàna izay tsy ara-dalàna rahateo.